Valery Bolotov: iqiniso mayelana umbusi wangaphambilini we-LC
Valeriy Dmitrievich Bolotov - abadumile zezombusazwe kanye isishoshovu kwezenhlalo, ukugqugquzela kutimela esifundeni eNingizimu-Eastern Ukraine. ubuso Bolotov sika ijwayelekile kunoma ubani ogcina elinganisene wonke, ngoba izenzo zakhe nethonya eliqondile ku isiphetho Donbass. Nokho, lapho wavela khona Valery Bolotov? Kuyini indlela yakhe yokuphila? Futhi lokho afuna ukuyenza?
Bolotov Valery: Biography
Valery wazalwa Februwari 13, 1970 ku eTaganrog, ku Rostov esifundeni. Nokho, maduze nje ngenxa yezimo, umndeni wakhe waphoqeleka ukuba bathuthele Ukraine. Lapha bakha emzini Stakhanov, okuyinto ngaphansi Lugansk.
Ngo-1988, Valery Bolotov esebizwa ukuba azokhonza empini. It ngabelwa Vitebsk division amabutho sisemoyeni zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngesikhathi inkonzo, Valery Bolotov ngokuphindaphindiwe waba nengxenye ekulweni. Ikakhulukazi, wayengumuntu e Yerevan, Nagorno-Tbilisi futhi Karabakh.
Ekubuyeleni kwakhe ekhaya, eqala kabusha ukuphila kwakhe yemisindvo. Wangena Luhansk Institute, ngakho Ngathola imfundo ezimbili ephezulu ku okukhethekile "sezomnotho" futhi "Inqubo engineer".
Ngeshwa, ulwazi olungenaphutha ngemithi umsebenzi wakhe e-domain yomphakathi asipheli. Okwamanje, senza nje ukuthi Valery Bolotov wayesebenze ku Aleksandra Efremova, ilungu samanje party "Isifunda". Ngokusho imibhalo, sasibhekwa yokushayela esigcwele futhi unogada indodana iphini.
Ngo kwababusi South-East Army
Ushintsho kwamandla e-Ukraine kuye kwaholela yokuthi ukuqala revolution yawo Donbass. Izakhamuzi Lugansk futhi IDonetsk engafuni ukwamukela ubufakazi bokufaneleka labo silubhade kulelo iziyisikhombisa zezombusazwe Ukraine. Kanjalo-ke, ngo-March 2014 siqala ukuvela kwevidiyo Donbass ukuvikela bahlaseli ezingaba khona.
Kulokhu, okokuqala umphakathi ayikwazanga ukubona izikhulumi ngabanye, kusukela ubuso babo zazifihliwe buso. Kodwa kamuva ngenyanga inhloko entsha South-East Army waklebhula kwesihenqo ekusithekeni futhi wembula ukuthi singubani ukuze zonke izibukeli. Kwaba Valery Bolotov.
Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke, umzabalazo nomholi wezempi izinkolelo zakhe futhi izinkolelo. Ukunqoba abokuqala maduze ngokwanele. Ngakho, ngo-April 21, 2014 lapho ezamenyezelwa Mphathi Luhansk Yabantu Republic. Nokho, naphezu kwazo zonke izimo zawo futhi impumelelo, August 14, 2014, Valery Bolotov eshiye yakhe futhi isikhathi kwanyamalala lens.
Ekulweni ezimpilweni zabo siqu
umbusi umthetho omusha Kwakungebona esilindele zabantu abaningi. Ngakolunye uhlangothi, yena waba ngokusobala kwazicasula iziphathimandla Ukrainian ngakolunye, akakuthandanga yalabo abanhliziyo endaweni wathatha. Lokhu kwaba isizathu ukuthi 13 Meyi 2014 kuhlaselwa kwenziwa kwaba phezu kwakhe.
Valery Bolotov kuqeda inxeba esifubeni. Impilo ka-lo mbusi omusha we LC hung esilinganisweni, kodwa usaphila. Makabongwe ukutshela odokotela ukuthi kahle umsebenzi super eziyinkimbinkimbi, wakhipha fighter elivela ezweni.
I okunye isiphetho Valery Bolotov
Esikhathini esithile Bolotov kwakusala kude izingobe zezombusazwe kanye nenzondo. Kwake kwathiwa wabulawa neziphathimandla Ukrainian, noma okungenani wamthatha isiboshwa.
Nokho, ngo-Okthoba 2014, wabonwa eMoscow. Ngemuva kophenyo lesibonwa wembula ukuthi wayeyoba Wajoyina iCommunist Party of the Russian Federation. Ndawonye bamhola uhlelo zomphakathi ukuqoqwa for zezenhlalakahle Donbas izakhamizi.
Ngo-April 2015 Bolotov sihleli Forum of Cities-namaqhawe, ezempi kanye zabasebenzi enkazimulweni. Lapho, yena nabanye Veterans wathola umklomelo ezandleni umholi Communist Party Gennady Zyuganov.
Apreli 29, 2014 Valery Bolotov wenza uhlu lwabantu banqatshelwe ukungena ensimini ka-European Union. Ngaphezu kwalokho, iPhalamende European uye simisiwe wonke amafa ukuthi beze ungaphansi kwegunya labo. Ngemva kwenyanga, lemithetho kuya Bolotov owethulwa Canada.
Metal conductivity kagesi njengoba sinjalo
"Faurin" (iso amaconsi): ukubuyekezwa. Eye lehla "Faurin": yokusetshenziswa, analogs, izinkomba ukusetshenziswa